Wararka - Nooca cusub ee tallaabooyinka hirgelinta ee loogu talagalay beddelka awoodda ee warshadaha birta iyo birta ayaa la soo bandhigi doonaa
Nooc cusub oo ka mid ah tallaabooyinka hirgelinta ee loogu talagalay beddelka awoodda ee warshadaha birta iyo birta ayaa la soo bandhigi doonaa
Wariyaha "Dhaqaalaha Macluumaadka Maalinlaha ah" wuxuu bartay in nooca cusub ee "Tallaabooyinka Hirgelinta ee Beddelidda Awoodda ee Warshadaha Birta iyo Birta" ay dhammaystireen heerarka raadsashada fikradaha iyo dib-u-eegista, isla markaana uu hadda la socdo geeddi-socodkii ugu dambeeyay. Tani waxay ka dhigan tahay tan iyo markii beddelka awoodda wax soo saarka birta ee waddankeyga iyo shaqada xareynta mashruucu ay hakad ku jiraan hal sano iyo badh tan iyo bilowgii sannadka 2020, beddelka awoodda wax soo saarka biraha ayaa markale bilaaban doonta
Qof awood leh ayaa sheegay in is burinta qotada dheer ee warshadaha biraha aan wali aasaas ahaan loo xalin. Bedelaada awooda ayaa ah qaab muhiim ah oo lagu gaaro isku dhafka dabiiciga ah ee mamnuucaya awooda cusub iyo hagaajinta qaabdhismeedka. Waxay ka caawin doontaa dalkayga hirgelinta wareeg cusub oo ah “de-capacity”, wuxuu hagidoonaa shirkadaha biraha ee dalkayga si loo wanaajiyo keenista awoodda iyo hagaajinta qaabka gobolka.
Wen Gang, oo ah ku xigeenka agaasimaha qaybta birta iyo birta ee waaxda alaabta ceyriinka ee wasaarada warshadaha iyo teknolojiyadda, ayaa ka sheegay shirkii ugu horreeyay ee Beibu Gulf Iron and Steel Development Forum ee 2021 inkasta oo xaaladda horumarka hadda ee warshadaha biraha ay tahay wax lagu farxo. , waa in sidoo kale la ogaadaa in warshadaha biraha ay leeyihiin kala-bax xoog leh oo ka imanaya awoodda wax-soo-saarka iyo wax-soo-saarka, iyo aasaaska yareynta awoodda ayaan ahayn mid adag. , Saamiga macdanta birta ee la soo dhoofiyo aad ayey u badan tahay, iwm, amniga warshadaha ayaa halis ku jira. Isla mar ahaantaana, weli waxaa jira khilaafaad qoto dheer iyo dhibaatooyin sida farqiga u dhexeeya horumarinta ganacsiga iyo shuruudaha horumarinta tayada sare leh, sidaa darteed si indho la’aan ah rajo uguma noqon karno.
Siyaasadda cusub ee beddelka awoodda wax soo saarka birta ayaa ujeedadeedu tahay in si adag loo ilaaliyo khadka cas ee aan lagu darin awoodda wax soo saar ee cusub. Wen Gang ayaa sheegay in saamiga beddelka ee awoodda wax soo saarka birtu uu noqon doono mid aad u adag. Tallaabooyinka hirgelinta awoodda wax soo saar ee dib loo eegay waxay si weyn u kordhin doonaan saamiga beddelka, ballaarin doonaan meelaha xasaasiga ah, iyo kordhinta xaddidaadda baaxadda dib-u-dhiska iyo ballaarinta aagagga gaarka ah. Laakiin isla mar ahaantaana, si loogu dhiirrigeliyo shirkadaha inay si mug leh u dhiirrigeliyaan isku-darista iyo dib-u-habeynta, horumarinta nidaamsan, sameynta birta foornada korontada, iyo sahaminta horumarinta tiknoolajiyada kaarboon-ka-yar, tallaabooyinka hirgelinta ayaa si habboon hoos ugu dhigaya saamiga beddelaadda, oo ka tarjumaya siyaasadaha taageerada kala duwan.
“Kordhinta saamiga beddelka wax soo saarka waa in la yareeyo horumarka asalka. Dejinta saamiga beddelka awoodda wax soo saar waa inay hubisaa in ka dib marka mashruuca la hirgeliyo, awoodda wax soo saar si wax ku ool ah loo xakamayn karo, mana jiri karto hoos u dhac ku yimaadda magac ahaan iyo kororka wax soo saarka dhabta ah. ” Gudaha ayaa yidhi.
Qofka ay khusayso wuxuu yiri iyadoo la hagaajinayo xiriirka saadka-baahida ee warshadaha birta, qiimaha birta ayaa dib u kacday, macaashka shirkaduhuna wuu fiicnaaday. Meelaha qaarkood, indho la'aan indha indheynta maalgashiga iyo iska indhatirka xaaladaha, ujeedo ah in si deg deg ah loo bilaabo mashaariic bir ah. Nidaamyada maaraynta mashruuca ayaa qeexaya inuu jiro ismaandhaaf ah "marka hore tareenka la fuulo ka dibna la iibsado tigidhka", taasoo ka dhigaysa warshadaha biraha inay weli halis ugu jiraan awood-darro xad dhaaf ah.
Sababtaas awgeed, tallaabooyinka hirgelinta ayaa cad, waana mamnuuc in la kordhiyo wadarta awoodda wax soo saarka birta ee aagagga muhiimka ah ee ka hortagga iyo xakamaynta wasakhda hawada. Gobollada (ismaamulada, dawladaha hoose) ee aan dhammaystirin wadarta guud ee bartilmaameedka awoodda wax soo saar birta ma aqbali doonaan awoodda wax soo saarka birta ee laga soo wareejiyay gobollada kale. Gobolka Yangtze River Economic Belt wuxuu mamnuucayaa mashruucyada cusub ee la dhalaalay ama la sii ballaariyay ee ka baxsan aagga u hoggaansamida.
Isla mar ahaantaana, Wen Gang wuxuu tilmaamay in sanadkan si firfircoon ula shaqeyn doono Guddiga Horumarinta iyo Dib-u-habeynta iyo waaxaha kale ee la xiriira si loo abaabulo "dib u jaleec" baaritaanka yareynta birta iyo yareynta wax soo saarka birta ceyriin, iyo in lagu hago shirkadaha biraha in ay ka tanaasulaan habka horumarinta ballaaran ee lagu guuleysto tiro, iyo si wax ku ool ah loo adkeeyo waxtarka yareynta awoodda. .
Tan ka hor, Komishanka Horumarinta Qaranka iyo Dib-u-habeynta iyo Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyada Teknolojiyada waxay sameeyeen qabanqaabo "dib u eegis" ku saabsan yaraynta awoodda birta ee 2021 iyo yareynta wax soo saarka biraha cayriin. Labada wasaaradood iyo guddiyadu waxay diiradda saari doonaan kormeerka xidhitaanka iyo ka noqoshada qalabka dhalaalaya ee ku hawlan xallinta awoodda wax soo saarka biraha ee xad-dhaafka ah iyo qabqabashada "birta maxalliga ah". Isla mar ahaantaana, tixgelinta guud ee kaarboonka, dhexdhexaadnimada kaarboonka iyo noodhadhka muddada-dheer, iyadoo diiradda la saarayo yareynta wax soo saarka birta ceyriinka ah ee shirkadaha leh waxqabadka deegaanka ee liita, isticmaalka tamarta sare, iyo heerarka qalabka teknoolojiyadda oo aad u yaraaday, iyadoo laga fogaanayo "hal cabir oo ku habboon oo dhan ”, iyo hubinta in biraha ceyriin ee dalka la gaari doono sanadka 2021. Waxsoosaarka ayaa hoos u dhacay sanadba sanadka.
Zhang Longqiang, oo madax ka ah Machadka Cilmi-baarista Heerarka Macluumaadka Warshadaha Metallurgical, ayaa sheegay in degaannada, ay lagama maarmaan tahay in si adag loo hirgeliyo tallaabooyinka beddelka awoodda, la kordhiyo saamiga beddelaadyada muddada-dheer, si adag loo dhaqan-geliyo xeerarka mamnuucaya awoodda wax-soo-saarka birta cusub, iyo in si adag loo baaro iyo wax ka qabashada ku tumashada sharciyada iyo xeerarka. Isla mar ahaantaana, iyadoo si cilmiyaysan loo wanaajinayo qaybinta xoogagga wax-soo-saarka ah, ifafaalaha "Gaadiidka Waqooyiga-Koonfurta ee Birta" ayaa si wax ku ool ah loo beddeli doonaa. Wuxuu soo jeediyay in magaalada Beijing-Tianjin-Hebei, awoodda wax-soo-saarka birta ee muddada-dheer la yareeyo; diirada saar Beijing-Tianjin-Hebei iyo meelaha ku hareeraysan, Yangtze River Delta, iyo aagag kale oo leh awood wax soo saar muddo-dheer urursan iyo jawiga deegaanka ee muhiimka ah, iyo qaabeynta caqliga iyo horumarinta warshad-sameynta muddada gaaban.
Luo Tiejun, gudoomiye ku xigeenka ururka Shiinaha ee birta iyo birta, wuxuu tilmaamay in koritaanka joogtada ah ee wax soo saarka birta wadankeyga ee ay waddo dalabku uu si wax ku ool ah u taageeray horumarka dhaqaalaha qaranka. Si kastaba ha noqotee, mustaqbalka fog, isbeddelka qaab-dhismeedka kobaca dhaqaalaha waddankayga, xaaladda "aan caadiga ahayn" ee isticmaalka biraha sanadkii la soo dhaafay iyo xilligan la joogo way adag tahay in la sii wado.
Luo Tiejun wuxuu soo jeediyay in xadka soo saarista ay qasab tahay in cadaadis lagu hayo, oo uusan jirin “hal cabir oo dhan”. Waa inaan diirada saarnaa yareynta wax soo saarka sharci darrada cusub iyo mashaariicda beddelka awoodda aan caadiga ahayn tan iyo 2016; xaddididda wax soo saarka ilaalinta deegaanka iyo shirkadaha aan caadiga ahayn; xaddidaya wax soo saarka birta doofaarka si loo xaddido soo saarista birta ceyriin. Shirkadaha gaadha heerka ugu hooseeya ee suntan A iyo foornada korantada ee warshadeynta birta, waa inay jiraan xaddidaadyo ka yar ama aan lahayn, laakiin wuxuu kaloo sheegay in waxa loogu yeero xaddid la'aantu aysan ahayn wax soo saar buuxa, iyo wax soo saarka shirkadahaan sidoo kale waa inaysan kordhin sanad-sannadka.